Chinja: Mobile App Kushambadzira Kuyera uye Kubiridzira Kudzivirira Platform | Martech Zone
Mugovera, March 31, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Chinja ichangobva kuburitswa yayo Mobile App Mabhenji chirevo, nemimwe mhedzisiro inonakidza. Benchmark yacho yaive yakavakirwa pamakumi mapfumbamwe emazana enhare mbozha, 11,000 bhiriyoni yekuisa mafoni app, 10.7 trillion mobile app inosanganisirwa zviitiko zvemushandirapamwe. Waiziva here, semuenzaniso, kuti:
The chinyorwa chakanzi kune yako nharembozha app mushandirapamwe unogona kuve unokanganisa kukanganisa kune kwese nhare mbozha yekuchengetedza, kuvimbika, uye kukosha kwevatengi kwehupenyu? Nekuda kwemushandisi wekutsvaga chinangwa, Google inotungamira iyo pack pane nharembozha yekushandisa kurodha mushandirapamwe masosi
Kuchengetwa kweApp kunosiyana zvakanyanya pakati nyika netsika. China, semuenzaniso, inoona yakaderera mafoni nhare yekuchengetwa kwemitengo yechero nyika, iine chete 7% yevashandisi vanogara neapp nezuva rechinomwe.
Chikamu cheApp ine simba rakakura pamafoni ekunyepedzera kuiswa. Mitambo iri makumi maviri nematanhatu yekukwezva kuisirwa hunyengeri pane kunyorera bhizinesi
Dhawunirodha Rongedza's Mobile Benchmarks Report
chinja ipuratifomu yekuyera nhare inobatanidza zvese zvako zvekushambadzira kuita papuratifomu, ichikupa iwo maonerwo aunoda kuyera bhizimusi rako rekushandisa. Heino pfupiso:
Chinja Kuyerwa Kwenhare uye Kubiridzira Kudzivirira Platform Zvimiro Zvinosanganisira:
Mobile App Attribution - teedzera ese ako ekushambadzira chiteshi uye uunganidze yako yekushandura data yeakadzika-kuongorora, kungave kuburikidza nekukanya kana kufungidzira. Nzwisisa mashandiro enhau ako mumatanho mazhinji ekushambadzira: tarisa uye wedzera vashandisi vako vari kuuya kune kwavanobva - mune chaiyo-nguva.
Nharembozha In-App Analytics - maturusi aunoda ekupedzisira-kumagumo app ongororo. Tsvaga zvinoitwa nevashandisi vako muapp yako kwete kungoita macro level, asi mune microscopic tsananguro: nyatso tsanangura, dissect uye wedzera data mafambiro, kubva pakutanga kwekutora kwemushandisi kune kwavo kwekutanga kutenga uye kupfuura.
Vavaki Vavaki - dzosera kumashure, ita, uye uwane vashandisi vatsva. Vavaki veVateereri vanochengeta iwo akaomesesa zvikamu zvekutangazve uye kuita nekuita kuti zvive nyore kwauri kuti iwe uvake zvikamu zvevateereri.
Kubiridzira Kudzivirira Suite - chengetedza bhajeti yako uye rega kubiridzira kushambadzira nhare munguva chaiyo. Gadziridza inokupa yakachena kushambadzira dhidhiiniti dhata yekunyatso kuongorora Rova zvinangwa zvako usingabhadhari zvekunyepedzera kuiswa.
Ona iyo Chinja Demo
WordPress Sidebar Widget uye Shortcode yekutamba Podcasts